Kaominina Ampitatafika Lasa misy olana ilay tanimenabe
Mahazo vahana tanteraka ny kolikoly eo anivon’ny sampandraharahan’ny fananantany ankehitriny.
Tranga maro samihafa no hita eto amintsika toy ny fisiana tany iray izay lasa misy tompony roa tampoka, ireo olona very tany nefa tompony manana taratasy ara-dalàna sy mazava…Anisan’ny lasibatra sy miaina izany ireo tompon-tany sasany etsy amin’ny tanimenabe Ampitatafika. Eo amin’ilay tany nototofana no misy io tranga io noho ny fitombon’ny vidin’ny tany eny an-toerana. Raha 10.000 Ar mantsy no vidin’ny tany 1 m 2 tamin’ny fotoan’androny, raha araka ny fanazavan’ny Ben’ny tanàna dia efa tena tsara vidy be ankehitriny ka hifandrombahan’ny olona. Teny am-piandohana anefa dia tsy nisy mpanontany akory ireto tany ireto satria sady lasa lava-biriky no tsy namoka-bary intsony, antony nanosika ny kaominina hiantso mpandraharaha hoenti-mampandroso ny tanàna ao anatin’ny fanatanterahana ilay tetikasa tanàna vaovao. Tsy vitsy ireo olona lasa nalaim-panahy nanao hosoka vokatr’izany ka tany karazany telo hatreto no efa nisy olona tao amin’ity tanimenabe ity. Anisan’ireny ny parcelle laharana 84 sy 84 bis. Eo ihany koa ny parcelle laharana 85 section BB izay zary lasa misy tompony roa samihafa ankehitriny sady manana taratasy ara-dalàna avokoa ka nihaona mivantana tamin’ny Ben’ny tanàna sy ireo mpanolotsainy, omaly. Niezaka ny nandamina sy nipetraka ho Raiamandreny ny kaominina manoloana izany. Raha sanatria ka tsy hita anefa izay marimaritra iraisana dia nilaza ny Ben’ny tanàna Rado Ramparaoelina fa tsara kokoa raha tonga hatreny amin’ny Fitsarana ny raharaha satria fisaka loatra ny rariny. Ilay Ramatoa milaza ho tompon’ny tany iray eo an-daniny tsy manaiky ihany koa fa hampiakatra ny raharaha satria tsy hamidiny, hono, ny taniny. Noho ny fangatahan’ity Ramatoa ity moa dia efa naaton’ny kaominina Ampitatafika ny fanotofana ny tany. Neken’ny kaominina ihany koa ny fitondrany vadintany sy mpandrefy tany teny an-toerana.